Excavator emele, Excavator ripper, Excavator coupler ekhawulezayo - MINYAN
excavator SIEVE BHAKITIKHI
excavator EPHAKATHI YEBHAKHI
Excavator EARHWORK YABAKITI
Xuzhou Minyan Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle, Ltd., ibekwe kweyona idolophu yoomatshini bokwakha eyaziwayo iXuzhou, China. lishishini labucala lobuchwephesha elidibanisa uyilo, imveliso kunye nentengiso ye-EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUCKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BUCKET TEETH, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR CICKPLER ekhawulezileyo, iimveliso zethu zilungele zonke iintlobo zeemodeli zokumba. Ezifana ne-CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI… Asisoze siyeke ukuphucula, sifuna ukuba ngabona baphambili kolu shishino, ukuze sibe ngabathembileyo abaSebenzi beBucket. Sijonge ukusebenza nawe!
Umgangatho wokuqala, amaXabiso okuQala, iTyala kuqala
Senza ikakhulu zonke iintlobo zebhakethi, ezifana ne-Mini emele, ibhakethi lomhlaba, ibhakethi lelitye, ibhakethi yesikrini, i-coupler ekhawulezayo, amazinyo ebhakethi kunye nezinye izinto ezigugileyo nezikrazukileyo ezilungele excavator. Sinokuvelisa zonke iintlobo zamabhakethi ezahlukileyo ngokweemfuno zakho. Iibhakethi zethu ze-Excavator zihambelana nomatshini nomsebenzi kwaye zibonelela ngokusebenza kakuhle kwisicelo sakho. Nokuba kukhutshwa ikwari, indawo yokwakha okanye ukuhombisa umhlaba-Iibhakethi zethu ze-Excavator zethu zigxila kumandla apheleleyo nasekusebenzeni komatshini kulowo msebenzi ukuwenza ngokugqibeleleyo. Wamkelekile umbuzo singakuqinisekisa elona xabiso lisezantsi ngomgangatho ophezulu.